Dragon Hills iapp yevhiki paApp Store | IPhone nhau
Dragon Hills ndiyo app yevhiki paApp Store
Miguel Hernandez | | IPhone maapplication, IPhone mitambo
Sezvo imi mese muchiziva, vhiki rega rega Apple inotipa mukana wekunakidzwa nemahara maapplication, vanyori vayo vanosarudza chishandiso icho nekuda kwezvikonzero zvakasiyana chinosangana nezvimwe zvinodiwa, saka Apple inotenda kuti vashandisi vayo vese vanofanirwa kunakirwa neshanduro yemahara kana vachirodha pasi panguva yenguva yemazuva manomwe. Kana iwe ukatitevera nguva nenguva, iwe unozoziva kuti isu tinogara tine vaverengi vanofambirana nekushandisa kwesvondo. Ino nguva yaive mutambo wevhidhiyo, Dragon Hills inyaya yehupenyu iyo ichatibvumidza isu kuva nenguva yakanaka pasina kushandisa zvachose peni.
Kazhinji ichi chishandiso inodhura euros gumi nemashanu, saka panguva ino kuchengetwa kunoverengeka. Mutambo uyu unotibvumidza kuti tigove ganda regondo, isu tinofanirwa kuritungamira munzira dzakateedzana, tichiedza kusarasikirwa nehupenyu hwedu mukuyedza uye kuwana huwandu hukuru hwemari panzira, isingamire. Aya ndiwo marudziro anoita Mapanduki Mapatya, timu yekusimudzira.
Mambokadzi ese akamirira muchinda kuti avaponese? Zvakanaka kwete panguva ino.
Tora itsvo kumusana kwedhiragoni ine ngozi mune chiitiko chakazara-chiitiko uye ubatsire mwanasikana wamambo akatsamwa pakutsvaga kwake kutsiva. Slide uchidzika makomo, svetukira mukati nekubuda muvhu uye uparadze zvese zviri munzira yako.
Vhima pasi Knights, kukunda dzimba, uye vawane nyika itsva!
• Super kunakidzwa mutambo pazere kumhanya.
• Zviitiko zvinoparara zvizere.
• Epic boss hondo.
Zvombo zvinokwidziridzwa, zvombo uye zvisingaite zvisingakwanisike kugona.
• Nyore kutamba, nzwisisa chidhiraivho chakabatanidzwa nehunyanzvi Gameplay.
• Kubudirira uye mabhodhi epamberi kukwikwidza neshamwari kubva kuGame Center.
• Tsigiro yeICloud.
Pamwe inguva yekukwira, mukana wakanaka. Mutambo unotora 85 MB, izvo zvisiri zvishomaAsi ayo akanakisa katuni mifananidzo uye rwiyo rwunonakidza kwazvo. Inoenderana nechero mudziyo unomhanya iOS 7.1 zvichienda mberi. Nekudaro, zvinosuwisa kuti mutambo uyu uri muChirungu chete, kunyangwe iwo mutauro uchinge usiri wekutanga.
Dragon Makomo3,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Dragon Hills ndiyo app yevhiki paApp Store
Kunyangwe zvinotaurwa naSchiller, Apple zvakare haina kunaka
Apple inotipa zvidzidzo zvemitauro kudoma zvigadzirwa zvavo